नेकपा एमालेमा महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी खारेज गर्ने ओलीको निर्णय !! | सुदुरपश्चिम खबर
नेकपा एमालेमा महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी खारेज गर्ने ओलीको निर्णय !!
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाएका छन् । आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधान संशोधन गरेका छन् । उमेर हद, कमिटीको संरचनामा संशोधन गर्दै २०७८ मंसिर २देखि ६ गतेसम्म दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छन् ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटीको ‘विशेष बैठक’ भनिएको छ, जसमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुलाई भने बोलाइएको थिएन ।
बैठकले अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल बाहेकका पदाधिकारीलाई हटाएको छ ।
तर ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव बने । पछिल्लो समय बामदेवलाई उपाध्यक्ष मनोनित गरिएको थियो ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भयो । यसको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदै २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला सुनायो । त्यसको पाँच दिनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर महासचिव ईश्वर पोखरेल बाहेक अरु पदाधिकारी नरहने निर्णय गराएका छन् ।
प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्यलाई हटाएर सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश २ बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा बादल, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा युवराज ज्ञवालीलाई हटाएर यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिमम प्रदेशको इन्चार्जमा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बादल समूहका २३ केन्द्रीय सदस्य
इन्चार्ज ः सुवासचन्द्र नेम्वाङ
अध्यक्ष ः देवराज घिमिरे
सचिव ः विनोद ढकाल
इन्चार्ज ः सत्यनारायण मण्डल
अध्यक्ष ः प्रभु साह,
सचिव ः सुमन प्याकुरेल
इन्चार्ज ः रामबहादुर थापा बादल
अध्यक्ष ः आनन्द पोखरेल
सचिव ः खेम लोहनी
इन्चार्ज ः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
अध्यक्ष ः जगत विश्वकर्मा
सचिव ः गोविन्द नेपाली
इन्चार्ज ः शंकर पोखरेल
अध्यक्ष ः लीला गिरी
सचिव ः खेममान खड्का
इन्चार्ज ः यमलाल कँडेल
अध्यक्ष ः गुलाबजंग शाह
सचिव ः धर्मराज रेग्मी
इन्चार्ज ः लेखराज भट्ट
अध्यक्ष ः कर्ण थापा
सचिव ः राजेन्द्र सिंह रावल
स्कुल विभाग प्रमुख ः केपी शर्मा ओली
संगठन विभाग प्रमुख ः विष्णु पौडेल
विदेश विभाग प्रमुख ः राजन भट्टराई
सम्पर्क कमिटी र कोष तथा आर्थिक विभाग प्रमुख ः छविलाल विश्वकर्मा
संसदीय विभाग प्रमुख ः सुवास नेम्वाङ
निर्वाचन विभाग प्रमुख ः विष्णु रिमाल